"Ilay divay vaovao" ao amin'ny fanjakana
"Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta; fa raha izany, ny divay dia hahatriatra ny siny hoditra, ka dia samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra; fa divay vaovao no ho ao anaty siny hoditra vaovao" - Mar. 2:22.
Mila fenointsika an'i Kristy mandrakariva ny saintsika, ary fongorantsika tsy ho ao ny fitiavan-tena sy ny fahotana. Fony i Kristy tonga teto an-tany, dia tafalatsaka lalina tao anatin'ny fampianaran'ny Fariseo ny mpitarika jiosy, hany ka tsy afaka nandray ny fampianaran'i Jesosy izy ireo. Nampitahain’i Jesosy tamin'ny hoditr'osy efa simba, izay tsy mendrika ny hampidirana divay vaovao avy any amin'ny fitoeram-boaloboka, izy ireo. Voatery nitady hoditr'osy vaovao izy hasiany ny divay vaovaon'ny fanjakany. Izany no antony nanalavirany ny Fariseo, ary nisafidianany ireo mpanarato tso-piainan' i Galilia.
I Jesosy no mpampianatra lehibe indrindra fantatr'izao tontolo izao, ary nifidy olona izay azony ampianarina Izy, olona izay handray ny teny aloaky ny vavany ka handefa azy ireny ho amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Araka izany, amin'ny alalan'ny Fanahiny sy ny Teniny, dia hampianatra anao hanao ny asany Izy. Amin'ny fotoana indrindra tena hamongoranao ny zava-poana sy ny rendrarendra hiala ao an-tsainao no hamenoana izany banga izany amin'ny zavatra izay efa andrasan'Andriamanitra homena anao dia ny Fanahiny Masina izany. Amin' izay fotoana izay, dia hamoaka zava-tsoa avy amin'ireo harena soa ao am-ponao ianao, dia ireo fisainana izay toy ny vatosoa sarobidy, ka horaisin'ny olona hafa ny teny ary hanomboka hidera an'Andriamanitra izy ireo. Tsy hifantoka amin'ny izaho intsony ny sainao amin'izay. Tsy hampidera tena intsony ianao; tsy haneho ny izaho intsony ianao; fa hitoetra eo amin'i Kristy ny sainao sy ny fitiavanao, ary hataratrao amin'ny olona hafa ny famirapiratana izay namirapiratra teo aminao, avy amin'ilay Masoandron'ny fahamarinana.
Hoy i Kristy: "Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro". Efa naharitra ilay loharano ve ianao? — Tsia, satria tsy mety ritra io loharano io. Vantany vao mahatsiaro mangetaheta ianao, dia afaka misotro rano, ary misotro rano indray. Feno hatrany Ilay loharano. Ary rehefa nisotro indray mandeha tamin'io loharano io ianao, dia tsy hitady hanala ny hetahetanao any amin'ny fitahirizan-drano any amin'izao tontolo izao, izay triatra; tsy hitady izay fomba hahazoanao fahafinaretana, fialam-boly, fifalifaliana, ary rendrarendra samihafa ianao. Tsia, satria efa nisotro tamin'ilay loharano izay mampifalifaly ny tanànan'Andriamanitra ianao. Amin'izay fotoana izay dia ho feno ny fifalianao, satria ho ao anatinao i Kristy, Ilay fanantenan'ny voninahitra. — RH, 15 Mar. 1892.